Waa sidee Xaalada Deegaanka Tukaraq Ee Gobolka Sool? | puntlandi.com
Waa sidee Xaalada Deegaanka Tukaraq Ee Gobolka Sool?
Wararka naga soo gaaraya Deegaanka Tukaraq ee Gobolka Sool oo ay shalay Ciidamada Difaaca Puntland ay kula dagaalameen Malayshiyaadka Soomalailand ayaa waxaa la soo sheegayaa in wali Goobihii lagu dagaalamay ay xiisadu wali ka taagantahay .
Goob jooge ku sugan Deegaanka Tukaraq ayaa Puntlandi.com u sheegay in ay Maqlayeen xalay Hubka Culus oo ay labada dhinac ay is waydaarsanayaan.
Magaalada Garoowe ayaa waxaa ka baxay Ciidamo kale oo lagu xoojinayay Ciidamadii horay ugu sugnaa Jiida hore ee Dagaalka.
Puntland ayaa sheegtay in dagaalkan ay guul ka gaartay ayna ku Qabsadeen hub iyo saanad Milatari .
Wasiir kuxigeenka Wasaarada Warfaafinta Puntland ayaa Bartiisa Facebook soo dhigay in ay Ciidamada Puntland intabadan ay la wareegeen Deegaanka Tukaraq .
Wararka ayaa sheegaya in labada dhinacba ay ku kala sugan yihiin Duleedka Magaalada , waxaana jirin ilaa iyo hada wax isku socod ah oo dadka iyo gaadiidka dadweynaha ah ,marka laga reebo dhaq Dhaqaaqa ay wadaan Ciidamada Puntland.
Qoysas farabadan oo ku sugnaa Deegaankii lagu dagaalamay ayaa waxa ay ka cabsi qabay in markale lagu dul dagaalamo .
Majirto ilaa iyo hada dagaal toos ah oo maanta ka dhacay Deegaankaasi ,balse Dowladda Puntland ayaa sheegtay in ay soo bandhigi doonto Maxaabiistii lagu qabtay dagaalkii shalay iyo khasaarihii ay gaarsiiyeen Malayshiyaadkii ku sugnaa Tukaraq.